एक युवकले एकै मण्डपमा एकसाथ दुई गर्लफ्रेन्डसंग बिवाह गरेपछि……… ! « गोर्खाली खबर डटकम
एक युवकले एकै मण्डपमा एकसाथ दुई गर्लफ्रेन्डसंग बिवाह गरेपछि……… !
एजेन्सी , इन्डोनेसियामा हालै मात्र एक युवकले एकै मण्डपमा २ युवतीका साथमा बिवाह गरेका छन।ति दुवै युवती उनका गर्लफ्रेन्ड रहेका र बिवाह देखि आफु निकै नै खुसि रहेको युवकले बताएका छन।
स्थानीय मिडियासंग कुरा गर्दै युवकले आफुले प्रेम गरेका दुवै जनाको मन दु:खाउन नचाहेको र सधै उनीहरुसंगै जीवन जिउन चाहेकाले आफुले एकसाथ दुई गर्लफ्रेन्डसंग बिवाह गरेको जनाएका छन।
पछिल्लो समय उनीहरुको विवाहका तस्बिरहरुले सामाजिक संजालमा ठुलै हलचल मच्चाईरहेको छ।यति मात्र होइन इन्डोनेसियामा दा’ईजो प्रथाको प्रचलन पनि सदियौंदेखि चलि आएको छ तर यहा दुलहीका माता पिताले होइन दुलाहाका माता पिताले दुलहीको परिवारलाई दा’इजो दिने गरेका छन।
दुईजना गर्लफ्रेन्डसंग एकसाथ बिवाह गर्ने उक्त युवकले दुबैको परिवारका लागि पाँच पाँच हजार रुपियाँ दा’इजो स्वरुप दिएका छन। उनीहरुको विवाहको भिडियो १७ अगस्तमा फेसबुक मार्फत शेयर गरिएको थियो।
विवाह भएको ३३ वर्षपछि जुम्ल्याहा दाजुबहिनी भएको थाहाँ पाएपछि…
अमेरिकाको वाशिंगटनमा एक विवाहित जोडी विवाह भएको ३३ वर्षपछि दाजुबहिनी भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ ।उनीहरु विवाह भएको ३३ वर्षसम्म पनि छोरा-छोरी नभएपछि सन्तानको चाहानामा एउटा क्लिनिकमा गएका थिए ।
डाक्टरले उनीहरुको बच्चा नभएको कारणको अनुसन्धान गर्ने क्रममा ल्याब असिस्टेन्टबाट अनुसन्धानका क्रममा उनीहरु जुम्ल्याहा दाजुबहिनी भएको कुरा पत्ता लगाएको छ । उनीहरु सन् १९८४ मा जुम्ल्याहा सन्तानको रुपमा एउटै आमाबाट जन्मिएको कुरा सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनीहरुका आमाबुबाको एक दु’र्घटनामा मृ’त्यु भएको थियो । अभिभावकको मृ’त्यु भएपछि उनीहरुलाई राज्यले रेखदेख गरेको थियो । राज्यले हुर्काएका कारण उनीहरु एक आपसमा कसैलाई नचिनेर विवाह गर्न पुगेका थिए । एजेन्सी
जब अचानक वलिवूड टिभीका संस्कारी बुहारी देखि माता पार्वतीको हट एन्ड बोल्ड शैली देखेपछि फ्यानहरु…(फोटोफिचर)
अचम्मको घटना ! किरिया बसेको नौ दिनमा जीवितै भेटिएपछि…सबै तर्सिए